Fiara kilalao elektrika
Ny zavatra mitaingina mba hialana
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-15
Miaraka amin'ny fiomananao rehetra, dia vonona ny handeha amin'ny lalana. Fa eo amin'ny dingan'ny mitaingina, ireto zavatra manaraka ireto dia tokony hosorohana manokana: Ny fampiasana frein tsy araka ny tokony ho izy Azafady mba tapaho aloha ny kodiarana aoriana mba hisorohana ny herin'ny frein dia lehibe loatra ka hianjera. Ny toerana misy ny frein dia azo ovaina araka ny...
Ny fiakaran'ny entana an-dranomasina tato ho ato
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-03
Mety ho vanim-potoanan'ny Krismasy fohy ho an'ny mpamatsy any Etazonia sy Eoropa. Mihamanakaiky ny firohondrohon'ny Krismasy, saingy nanakana ny seranana lehibe maro eran'izao tontolo izao ny fitakiana mafy ny entam-barotra, ny tsy fahampian'ny mpiasa, ny fiverenan'ny COVID-19 ary ny fiantraikan'ny domino entin'ny rivo-doza.
Amin’izao fotoana izao dia misy tranga vaovao miseho eto amintsika, ary hisy ny fanaraha-maso amin’ny faritra sasany. Ny mpanjifa dia tokony hametraka baiko avy hatrany raha mila bisikileta, raha tsy izany dia mety hisy fiantraikany amin'ny varotra amin'ny ho avy sy ny fotoana fanaterana. Amin'izao fotoana izao, manana ireto safidy fanangona manaraka ireto isika: bisikileta Spider Kids ...
Stok vaovao amin'ny bisikiletan'ny ankizy
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-19
Bisikileta Spider Kids amin'ny tahiry. Details: habe 12- 14-16-18-20 mirefy Loko: Mena manga ,Mavo, Maitso Môtô môtô ankizy misy tahiry. Details: habe 12-14-16 mirefy Loko: mena, maitso, manga, voasary
Inona no maha samy hafa ny bisikileta an-tendrombohitra sy ny lalana bisikileta?
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-11
Ny mpamily eny an-dalambe dia mila famokarana herinaratra maharitra maharitra, saingy noho ny lalana isan-karazany sy ny hazakazaka bisikileta an-tendrombohitra ary ny fiovan'ny toetr'andro, dia matetika ireo mpitaingina bisikileta an-tendrombohitra mandritra ny vanim-potoanan'ny famokarana herinaratra avo lenta, ary matetika miaraka amin'ny fijanonana mialoha, mandritra ary aorian'izay. amin'ity vanim-potoanan'ny famoahana mahery vaika ity ...
Tsara ho an'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ny bisikileta
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-06
Tsy tsara ho an'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ihany koa ny fanaovana bisikilety Avelao ny olona iray hahazo zavatra betsaka Koa satria nankafiziko tamin'ny bisikileta aho, dia tsara kokoa ny fanahiko manontolo Raha mahafantatra olona tia bisikileta ianao Jereo isaky ny mitaingina ianao Fiomanana isan-karazany Alao ny fitaovanao amin'ny toerana mora indrindra hahazoana azy aloha aorian'ny ...
Mety hampidi-doza ny mitaingina bisikileta amin'ny kibo foana
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-01
Ny iray amin'ireo tsy fahampian'ny bisikileta mahery vaika amin'ny vavony foana dia ny fiankinan'ny vatana amin'ny heterosomes matavy ho an'ny angovo rehefa tsy misy. Amin'izao fotoana izao, ny asidra matavy maimaim-poana ao amin'ny ra dia ho avo kokoa. Ny asidra matavy dia loharanon'ny angovo ho an'ny asan'ny hozatra toy ny fo ...
Manomboka anio ny hetsika hazakazaka am-bisikileta amin’ny lalaom-pirenena faha-14.
Hanomboka ny 24 septambra ho avy izao ny lalao famaranana amin’ny hazakazaka am-bisikileta amin’ny lalao faha-14 ao amin’ny Repoblika Entim-bahoakan’i Sina. Mpilalao 229 avy amin’ny ekipam-pirenena 27 no nisoratra anarana hiatrika ny fifaninanana haharitra efatra andro, ahitana atleta lehilahy 132 ary atleta vehivavy 97. Medaly volamena 6 kosa no ho an’ny lehilahy/wo...
Tontosa soa aman-tsara ny hazakazaka am-bisikileta an-tendrombohitra andiany faha-14
Ny 21 septambra, dia tonga amin'ny fotoana izay fetiben'ny vahoaka Shinoa ny fetiben'ny Mid-Autumn, ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina amin'ny faha-14 ao amin'ny Yanan huangling games project mountain bike project final forest park, ekipa 19 manerana ny firenena (anisan'izany club amateur, et...
Torohevitra momba ny fikojakojana ny bisikiletan'ny ankizy
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-13
Torohevitra momba ny fikojakojana ny bisikiletan'ny ankizy Fikojakojana fiara 1, alohan'ny fampiasana, ny lasely sy ny kodia fanampiny dia tsy maintsy amboarina amin'ny haavony ilainao. 2, fiara vaovao ampiasaina mandritra ny tapa-bolana eo ho eo, ny fihodinan'ny anoloana, ny axle aoriana, ny axle ary ny kodiarana dia averina, mba hihazonana ny fiasa ara-dalàna. 3, c...
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-27
Hazo naratra 01 Tao amin'ny toeram-pambolena iray tany Etazonia tamin'ny taona 1950. Nasiany peratra vy manodidina ny iray tamin’ireo hazo elmàny ny mpamboly iray mba hanamora ny famatorana ny ombiny. Rehefa nitombo ilay elm, dia niraikitra tsikelikely tao anatin’ilay hazo ilay peratra vy, ka namela fery lalina teo amin’ny hodiny. Herintaona, nisy aretina holatra hafahafa...
Inona no soa azon’ny ankizy mitaingina bisikileta?
Inona no soa azon’ny ankizy mitaingina bisikileta? Voalohany, azo atao ny fihetsika tsara mitaingina 1) Ny tsy fahampian-tsakafon'ny tongotra miendrika X, dia mitana anjara toerana amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny zaza. 2) Manatsara ny fandrindrana sy ny fifandanjana Amin'ny alalan'ny bisikileta amin'ny sehatra samihafa, ny balan...
Hebei Beimudou Trading Co., Ltd. hita ao Shijiazhuang, Hebei Province, dia matihanina fanafarana sy fanondranana orinasa varotra, manana traikefa an-taonany maro ny bisikileta raharaham-barotra.
Bike ho an'ny ankizy 48 santimetatra, Lalao Girls Balance Bike, Bisikileta/bisikileta karbônina 12 mirefy, Pink Balance Bike, Bisikileta/bisikileta 20 mirefy, Balance bisikileta,
Zhuye Gaoxin International 001-1308, No.9 Changjiang Avenue, Gaoxin District, Shijiazhuang, Hebei ,Shina.